Bayern Oo Xod-xodanaysa Xidiga Mustaqbalka Ifaya Leh Ee Adnan Januzaj
HomeChampions LeagueBayern Oo Xod-xodanaysa Xidiga Mustaqbalka Ifaya Leh Ee Adnan Januzaj
Kooxda horyaalnimada Yurub iyo Kan Bundesligahaba difaacanaysa ee Bayern Munich ayaa diirada ku haysa da’yaraha kooxda Manchester United ee Adnan Januzaj oo ay damacsan tahay inay heshiiskiisa ka rux-ruxato kooxda Ingiriiska ah.
Bayern oo caawa dagaal ku dhex mari doono garoonka Old Trafford naadiga Manchester United, is araga koobaad ee rubuc dhamaadka tartanka horyaalka Yurub, ayaa qiimayn doonta qaab ciyaareedka iyo wax soo saarka laacibka 19 jirka ah ee Januzaj oo wacdaro la soo baxayay maalinba maalinta ka dambeysa , tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda heerka koowaad xagaagii hore.
Naadiga Paris St Germain ayaa hungo ka qaaday dalabka ciyaaryahankan ay ku doonaysay oo ay United soo gaadh siisay bilowgii xili ciyaareedka , waxaanay kooxda shayaadiinta dharka cas lihi nidar ku martay inaanay aqbali doonin codsi kasta oo lagu doonayo xidigeeda mustaqbalka ifaya ku leh kubada cagta.
Xidigan u dhashay wadanka Belgium-ka ayaa isna qalinka ku duugay shan sanno oo heshiis ah oo uu la gallay kooxda Manchester bishii October , iyadoo uu Tababare David Moyesna hoosta ka xariiqay waxa uu ka aaminsan yahay Januzaj iyo inuu safka hore kaga jiro qorshaha mustaqbalka ee uu ku dhisayo naadiga Man United.
Bayern Munich ayaan wali laga haynin wax dalab ah , laakiin sida ay xaqiijinayaan warar laga helayo ilo wareedyo la rumaysan karo , ayaa tilmaamaya in damaca Munich uu yahay Mid xoog ah.
Kooxda Munich ayaa dhinaca kale la sheegay inuu liiska doonista safka hore uu ugu jiro laacibka kooxda Chelsea ee David Luiz.